Tallaalka shaqaalaha: da'da kooxda oo yaraatay
Adeegyada caafimaadka shaqaaluhu waxay ku tallaali karaan shaqaalaha laga bilaabo Febraayo 25, 2021 tallaalka AstraZeneca.
Asal ahaan, ololahan tallaalku wuxuu u furnaa shaqaalaha da'doodu tahay 50 ilaa 64 jir oo ay ka mid yihiin cudurro kale.
Laga bilaabo hadda, Hay'adda Sare ee Caafimaadka waxay ku talineysaa in la isticmaalo tallaalka AstraZeneca oo keliya dadka da'doodu tahay 55 iyo wixii ka weyn.
Dhakhtarka shaqada, waa inuu ilaaliyaa sharciyada laxiriira mudnaanta dhagaystayaasha lala beegsaday ololahan talaalka, wuxuu hada kaliya talaali karaa dadka da'doodu udhaxeyso 55 ilaa 64 oo ay kujiraan cuduro lasocda.
Ogow inaadan ku soo rogi karin tallaal shaqaalahaaga. Xaqiiqdii, adeeggaaga caafimaadka shaqada wuxuu tallaali karaa oo keliya shaqaalaha iskaa wax u qabso ah ee buuxiya shuruudaha la xiriira xaaladdooda caafimaad iyo da '.
Kahor tallaabada, dhakhtarka shaqada waa inuu hubiyaa inuu shaqaaluhu xaq u leeyahay ololaha tallaalka.
Sidaa darteed, xitaa haddii uu garanayo xaaladda caafimaad ee shaqaalaha, waxaa lagula talinayaa in shaqaaluhu u yimaadaan ballanta iyagoo wata dukumiintiyada caddaynaya cudurkooda.
Talaalka shaqaalaha: u sheeg shaqaalahaaga sharciyada cusub
Tallaalka shaqaalaha: helitaanka wuxuu ku kooban yahay dadka da'doodu u dhexeyso 55 ilaa 64 jir oo ay ka mid yihiin cudurro la wadaago July 8th, 2021Tranquillus
READ BIG - Hordhaca Bioinformatics iyo Daawooyinka Genomic
horeHeshiisyada wadajirka ah: loo shaqeeyuhu waa inuu muujiyaa inuu si wanaagsan u abaabulay la socoshada culeyska shaqaalihiisa maalmaha xirmooyinka
socdaTababbarka maamulaha bulshada ama isboorti heer sare ah, Romain wuu diiday inuu doorto.